रक्सी खानेलाई मात्र मासु! -
Home जीवनशैली रक्सी खानेलाई मात्र मासु!
पिप्लाङमा मन यसै स्थिर थिएन। शरीर थिलोथिलो भएको थियो। मौसम सुख्खा। उराठलाग्दो। हामी बस्ने होटल गाउँपालिकाको कार्यालयको आडैमा थियो। गाउँपालिकाको पशु सेवा शाखा पनि त्यही घरमा थियो।
हामीलाई खाना खाएर बिस्तरामा ढल्किन मन थियो। जिउ पूरै दुखेकाले धेरै भुल्न सकिने अवस्था थिएन। नखाने भन्यौं। साहुजीले सेतो चामलको भात र सिमीको दाल दिए। अनि आलुको तरकारी। टिकाराम सरले ‘मासु पनि दिनुस् न’ भने। हिजो नाफामा सिंगै भाले खाएकाले मलाई मासु खाने मन थिएन।
तै पनि हरियोपरियो नहुँदा खाना अलि खल्लो लागेको थियो, प्याज मागेर खायौं। बेलुकाको ‘खानाअघिको सेसन’मा त्यहाँ अरूले थपीथपी मासु खाएका थिए। आजै लोती खोलामा मारेका माछा ल्याएर पकाएको पनि देखिएको थियो। तर साहुजीले माछा-मासु केही दिएनन्। जिउ बेस्सरी दुखेकाले खानापछि सिटामोल खाएर सुतेँ।
भोलिपल्ट चैते दसैं थियो। होटलवालाले बिहानै खसी काटेका थिए। ‘आज त मज्जाले मासु भात खाइने भयो,’ टिकाराम सरले सुनाए। मलाई भुटन मनपर्ने भएकाले बनाउन भनेँ। केहीबेरमै साहुजीले हामीलाई खाना खान बोलाए।
भोलिपल्ट पिप्लाङ छोड्ने दिन। त्यसपछिको हाम्रो गन्तव्य अदानचुली थियो। त्यो कता पर्छ भन्ने हामी दुबैलाई थाहा थिएन। न बाटो नै थाहा थियो। बाटो थाहा नभए पनि यात्रामा निस्किएका थियौं हामी। हिँड्ने सबै बाटो कहाँ थाहा हुन्छ र ?
पिप्लाङमा तरकारी राम्रो हुन्थ्यो। हिजो दिउँसो प्रहरी चौकीमा नुहाउन जाँदा हामीले हरियो तरकारी देखेका थियौं। त्यहाँ पानी पनि थियो। उनीहरूले मेहनत पनि गरेका थिए। हामीले एक छाक साग टिपेर होटलमा ल्यायौं। पिप्लाङको बाँझो बारीमै टन्न प्याज फलाउन सकिन्थ्यो होलाजस्तो लाग्यो। हामी हाँसीखुसी पिप्लाङबाट बिदा भयौं।
रमाइला दुई रातः पिप्लाङदेखि बाख्रेसम्म पुर्‍याउन जूनबहादुर हामीसँगै हिँडे। पिप्लाङबाट पौने घण्टा दुरीमा सलिसल्ला थियो। त्यहाँ स-साना दोकान थिए। हिमाली जिल्लाको यात्रामा हामीले दूधदही खान पाएका थिएनौं। घाँसपरालको अभावमा होला सायद जहाँतहीँ पशुहरू दुब्ला देखिन्थे। त्यस्ता दुब्लाबाट दूध कसरी आउला र!
बालुकुनाबाट हामी सर्केगाडको सीमाना काटेर अदानचुली लाग्यौं। बडखोला तर्नासाथ कर्णाली किनारमा ठूलो फाँट देखियो। तुम्च। फाँटमा हरियो गहुँबाली थियो। मनमोहक। हामीलाई लिन आएको रिजर्भ जीपले मिलेसम्म मान्छे चढाउँदै र ओराल्दै गरिरह्यो। गल्फागाडबाट मूलबाटो छोडेर गाडीमै केहीबेर उकालो चढेपछि अदानचुली पुगियो। उत्तरपूर्व फर्केको पाखोमा श्रीनगर थपक्क बसेको थियो। त्यहीँ हाम्रा रमाइला दुई रात बिते। कमलराज लम्साल…Setopati.com